Shiinaha Baaritaanka Heerkulka la tuuro iyo Warshadda dareeraha tuurta ee SPO2 iyo alaab-qeybiyeyaasha. Biotek
Baaritaanka Heerkulka la tuuro
BOT-B / BOT-D / Dhalada-Q
Baaritaanka heerkulka jirka ee la tuuri karo wuxuu adeegsadaa astaamaha muuqaalka jirka ee adkeysiga heerkulka sare ee sahaminta dhamaadka baaritaanka uu isbeddelayo isbeddelka heerkulka dibedda si loogu xiro baaritaanka heerkulka jirka kormeeraha iyadoo lala socdo moduleka la socodka heerkulka jirka. Isbeddelka isbeddelka kuleylka ee heerkulka ayaa loo beddelaa calaamadda korantada iyo soosaarka kormeeraha si loo xisaabiyo qiimaha heerkulka jidhka ee u dhigma. Waaxaha lagu taliyay: qolka qalliinka, qolka gurmadka, ICU; waaxaha guud ee u baahan cabbiraadda heerkulka joogtada ah.
Cku xidhan qalabka kormeeraha, si loo cabbiro heerkulka hunguriga, malawadka iyo sanka.
1.Soft, siman, fududahay in la isticmaalo, si looga hortago infekshinka iskutallaabta;
Adkaysiga wareegga kuleylka ee 2.Excellent;
Baaritaanka 3.Mini wuxuu cabbiri karaa heerkulka saxda ah.
Baaritaanka la galiyay wuxuu xajin karaa heerkulka si uu u sameeyo saxnaan sare.
Qalabka 'SPO2' waxaa loo adeegsadaa cabbiraadda aan faafin ee joogtada ah iyo kormeerka dhererka oksijiinta iyo garaaca garaaca wadnaha ka dib markii lagu xiro kormeeraha halbeegga badan ama garaaca wadnaha. Boqolkiiba ogsijiinta iyo haemoglobin ee dhiigga ayaa ka tarjumi kara waxa oksijiinta ku jira nidaamka wareegga dhiigga aadanaha waxayna muujineysaa inay jirto anoxia ama khalkhal microcirculation. Mabda'a Cabbiraadda: habka cabbirka hadda waa in la isticmaalo dareeraha sawir-qaadaha faraha. Markaad qiyaasayso, dareeraha ayaa kaliya u baahan in la saaro farta aadanaha. Farta waxaa loo isticmaalaa weel hufan oo loogu talagalay haemoglobin, iftiinka cas ee dhererkiisuna yahay 660 nm iyo 940 nm ayaa loo isticmaalaa nm meel u dhow infrared waxaa loo isticmaalaa isha iftiinka si loo cabiro xaddiga gudbinta iftiinka ee sariirta unugyada si loo xisaabiyo hemoglobin fiirsashada iyo buuxinta oksijiinta dhiigga. Qalabku wuxuu soo bandhigi karaa qanjirka oksijiinta ee jirka aadanaha.
Waxaa loo adeegsaday in lagu cabiro oo lala socdo saturajiinta iyo heerka garaaca wadnaha.
1. Isticmaal kali ah, si looga fogaado infekshinka iskutallaabta;
Tayada 2.Top, aan sun ahayn, faragelinta ka hortagga, fiilada jilicsan ee waarta;
3.With saxsanaanta sare.
Hore: Shirkadaha ugu sareeya Shiinaha China PVC Nasal Airway / Nasopharyngeal Airway
Xiga: Tube Endotracheal PVC Fasalka Caafimaadka oo leh tuubada nuugista